संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिबीच पार्टी एकता भोलि, सत्तापक्ष बन्ने भए बाबुराम भट्टराई संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिबीच पार्टी एकता भोलि, सत्तापक्ष बन्ने भए बाबुराम भट्टराई – Akhabar Nepal
देश, प्रदेश २, ब्रेकिङ न्युज, मुख्य खबर
संघीय समाजवादी फोरम र...
संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिबीच पार्टी एकता भोलि, सत्तापक्ष बन्ने भए बाबुराम भट्टराई
२०७६, २२ बैशाख आईतवार १६:४१
काठमाडौं: संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिबीच पार्टी एकता भोलि घोषणा हुने भएको छ । एकीकृत पार्टीको नाम ‘समाजवादी पार्टी नेपाल’ हुनेछ भने डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव दुबै पार्टी अध्यक्ष हुनेछन् । भट्टराईले संघीय परिषद् र यादवले केन्द्रीय समितिको अध्यक्षता गर्ने सहमति जुटेको छ । सहमतिमा दुबै अध्यक्ष नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका भट्टराई र फोरम नेपालका यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले तत्कालै सरकार नछाड्ने भएपछि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालसँग एकीकरणको घोषणासँगै यादवले तत्काल सरकारभित्रै रहेर संघर्ष गर्न रणनीति लिएको छ ।
फोरम र नयाँ शक्तिका नेताहरुबीच भएको सहमति अनुसार संसदको चालु अधिवेशनसम्म उपेन्द्र यादव सरकारमै रहनेछन् । भोलि घोषणा हुन लागेको समाजवादी पार्टीको घोषणा कार्यक्रमबाट नेताहरुले सरकारलाई चेतावनी दिनेछन् । उक्त मञ्चबाटै प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिने तयारी रहेको छ ।
पार्टीको पदाधिकारीमा फोरमका १६ र नयाँ शक्तिको हेडक्वाटरमा रहेका ९ जना गरी २५ सदस्यीय हुनेछ । केन्द्रीय सदस्य (नयाँ शक्तिको १५१ र फोरमका २०० बढी) हुनेछ भने संघीय परिषदमा एक हजार बढी सदस्य हुने छन् । जिल्ला संरचना पनि दुबै पार्टीको मिलाइनेछ ।
दुबै दलबीच भएको सहमति अनुसार फोरमले एक हजारबाट घटाएर ६ सय र नयाँ शक्तिले ६ सयबाट घटाएर ४ सय सदस्य राख्ने छन् । समाजवादी पार्टीको महाधिवेशन आयोजक समिति एक हजार सदस्यीय हुनेछ । हाल कायम रहेको दुबै पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुको संख्या यथावत रहनेछ ।
वरीयता क्रममा डा. भट्टराई पहिलो रहने छन् भने यादव दोस्रो । पार्टीको अध्यक्षको रुपमा यादव रहने छन् भने संघीय परिषद्को अध्यक्ष भट्टराई रहनेछन् । संघीय परिषद् केन्द्रीय समितिभन्दा पनि शक्तिशाली हुनेछ । पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा दुबै पार्टीको संख्या निश्चित भएपनि तल्लो तहको एकीकरणमा कुनै भागबण्डा नहुने सहमति भएको छ ।